Viking matatoo: magamba kufemerwa ne | Kunyora
Viking maTatoo: magamba ekukurudzirwa na
Munguva pfupi yapfuura tataura zvakawanda nezve maViking maTatoo, kunze kwe zviratidzo zvematato yeava vane mukurumbira varwi kana ve nordic nyora, imomo mataitaura nezve akasiyana mativi kutora mukana wematatoo aya.
Nhasi tichataura nezve chimwe chinhu chakasiyana muViking nyora. varwi vanotyisa vengano isu tinogona kutora kurudziro kubva. Vamwe vanozivikanwa, vamwe kwete zvakanyanya, asi vese ndivo protagonists venhoroondo dzakakwana kumiririra mune nyora.
1 Odin, kufa uye nhetembo
2 Thor nenyundo inotonhorera
3 MaValkyries, varwi vanotyisa
4 Loki, mwari joker
5 Freya, mwarikadzi werudo nehondo
6 Siegfried, iro gamba rakauraya shato yakashata
7 Ragnar Lodbrok, iyo Viking kubva kuTV
8 Ervar-Oddrm, iro gamba jinx
Odin, kufa uye nhetembo
Wekutanga wevatambi vatinogona kutora pane tattoo ndiOdin. Odin murume akaoma uyo anorwa nepfumo uye bhiza rake rakavimbika rine makumbo masere, Sleipnir. Iye anogara mumuzinda weAsgard, kubva kwaanoona zvese zvinoitika munyika pfumbamwe kubva pachigaro chake.
Odin ndimwari hunhu hwehasha dzake uye neshungu. Zvichida ndosaka ari iye mwari wehondo, asi zvakare, zvinoshamisa, zvenhetembo uye nyaya. Zvinonzi achatungamira vanamwari kusvika kumagumo enyika uye kuti mhumhi Fenrir ichamudya.
Se tattoo, Odin inoshanda zvishamiso nekuda kwezvinhu zvinoita kuti zvisiyane (chigamba, semuenzaniso). Sarudza chaiyo, nhema-uye-chena dhizaini kuti ipe iyo inoshamisa uye inoshamisa toni.
Thor nenyundo inotonhorera
Thor inozivikanwa kune vese (pamwe nekutenda kune blond Marvel). Nenyundo yake, Thor ane simba pamusoro pezvirimwa uye, kunyangwe aine nyundo yake anogona kuparadza hofori dzehofori, anga agara aine rugare nerunyararo.
Chinhu chinodikanwa ndechekuti kuzvipira kuna Thor kwakadenha mamishinari echiKristu aida kutendeutsa maGerman hongu kana hongu kune chinamato chake kwemazana emakore nekutenda sando yake, iyo yakave dumwa (kwete saizi yehupenyu, hongu) yevakatendeka vake.
Mune tattoo Thor, saOdin, ane rombo rakanaka rekuve nechinhu (sando) chinomuita kuti azivikanwe ipapo ipapo, iyo yaunogona kusarudza nayo ese magadzirirwo akafuridzirwa nemakomiki uye nezvimwe zvechivanhu masosi kana kunyangwe akagadzirwa zvachose newe kana yako tattoo muoni.
MaValkyries, varwi vanotyisa
Imwe yenhamba dzinonakidza dzeNordic kufemerwa neyeViking maTatoo ndiwo maValkyries, mhandara varwi vanorwisa zino nezvipikiri. Kunyangwe paine akati wandei maValkyries ane nyaya dzinonakidza kwazvo, anonyanya kuzivikanwa ndiBrunhilda, protagonist we Mhete yevaNibelungs.
Nzira yakajairika yekuvamiririra mumatato ndeyemhandara yakakwira bhiza rinobhururuka., vakapakata pfumo neuta, pamwe nenguvo uye nhumbi dzokurwa uye murwi. Idzo zvidimbu zvinotaridzika zvakanaka munzvimbo senge yekumashure kana iri hombe uye showy dhizaini.
Loki, mwari joker
Ndiani mumwe asingazivi Loki, muchidimbu, zvakare, nekuda kweMarvel, kupi Ndiye mukoma waThor uye dzimwe nguva anopikisana. Pakutanga, Loki aifungidzirwa, zvirokwazvo, mavambo ekunyengera kwese. Nekudaro, iye munhu akafukidzwa nezvakavanzika kubvira, kunyangwe achionekwa mungano zhinji semwanakomana wehofori mbiri dzakagamuchirwa naOdin, haana kunamatwa.
Kana zvasvika pakutora kurudziro kubva kune tattoo, zvakajairika kuwana Marvel's Loki seye protagonist (kungave kubva kumakomiki kana mafirimu, akaridzwa naTom Hiddleston), aine ngowani yake hombe ine nyanga uye siginecha yake mavara, girini negoridhe.
Freya, mwarikadzi werudo nehondo
Mumwe wevanonyanya kukosha mungano dzeViking, uye mukwikwidzi akakwana wematatoo eViking, ndiFreya, mwarikadzi werudo, kubereka, bonde nehondo. Zvinonzi mwarikadzi uyu anotonga iyo Fólkvangr, munda wakanaka uko hafu yevanhu vedu vanoenda kuhondo (imwe hafu inoenda kuValhalla, izvo zvinonzwika zvakanyanya kujairika kwauri, dura reOdin).
Se tattoo iwe unogona kupa Freya bata inotonhorera pamwe nengoro yake, pamwe akanakisa pasirese uye iyo inomutsa kutya kukuru muvavengi vake kubvira, anodhonzwa nekatsi mbiri! Majee padivi, mwarikadzi uyu anoshandiswa kumumiririra aine bvudzi refu refu bvudzi uye hunhu hwepanyama nekuti anozviona iye mwarikadzi wepabonde uye rudo.
Siegfried, iro gamba rakauraya shato yakashata
Rimwe remagamba anozivikanwa eViking ndiSiegfried, uyo akararama zviitiko zvakawanda, asi anozivikanwa kwazvo ndiye anogona kunge akamutora kuti atore pfuma ichengetedzwe naFafnir anotyisa., zibukanana rakachengetedza hupfumi hwevaNibelungs (zvirokwazvo, mukurumbira waro zvakare wakakodzera Mhete yevaNibelungs). Nhoroondo yacho ndeyekuti mudiki Siegfried akakura nemupfuri uyo akamudzidzisa kuuraya chikara chinotyisa: nebakatwa akabaya moyo wake ndokushambidza muropa raFafnir kuti azvigone kusingakundike.
Siegfried yakanakira iwo maTattoos anoda kuzvisimbisa pane iyi ngano kuti vawane dhizaini isina kujairika: iyo yekutyisa Viking kuuraya, kana kushambidza muropa, yedhiragoni. Icho chaicho chinoshamisira dhizaini icho chinogona kutevedzera chaicho chimiro.
Ragnar Lodbrok, iyo Viking kubva kuTV
Zvichida mushure meVicky muViking murwi anozivikanwa kwazvo wekuchamhembe ndiye Ragnar Lodbrok (zita rekupedzisira iro rinoshandura zvakanakisa se 'breeches ane mvere', nekuti akashandisa iro nguo rinodzora moto kuuraya shato mbiri, sezviri pachena mutambo wefashoni panguva iyoyo), protagonist yenyaya dzakateedzana Vikings. Mwanakomana waMambo weSweden, Ragnar anga ari denda reEngland neNormandy nekutenda kune ake mazhinji mafayera munzvimbo idzodzo.
Sezviri pachena, Ragnar maTattoo ari galore nekuda kwebasa rake mumutambo weTV. Nekudaro, kana iwe uchida imwe nzira yekutanga, unogona kufemerwa neyakagadzirwa kubva kune zvimwe zviwanikwa nemifananidzo, kana kutozviumba iwe pachako.
Ervar-Oddrm, iro gamba jinx
Kana paine gamba rejinx mune dzese ngano dzeNorse, ndiyo Norwegian Örvar-Oddrm. Nyaya yake inotanga apo, semwana mudiki, muprofita anoporofita kuti bhiza rake chairo richamuuraya mumusha wake wekuuraya. Izvi zvinoita kuti Örvar-Oddrm afunge kuuraya bhiza rakashata kuitira kuti chiporofita chisazadzike uye afunga kutiza kubva pamba. Iyo gamba rinotanga zviitiko zvakawanda mukati memakore, kusvikira, achityairwa nemhino, anodzokera kumba. Paanoshanyira guva rebhiza rake, anoseka chiporofita, anogumburwa nedehenya, iro rinobuda nyoka inomuruma uye, chokwadika, anofa.
Nyaya yake yakanakira kwete kungomuratidzira semurwi ane hutsinye, asiwo kushandisa zvinhu zvakasviba sedehenya nenyoka mukugadzira., iyo inogona kufananidzira pfungwa yekuti munhu haagoni kunzvenga njodzi kana kufa.
MaViking maTatoo akafemerwa nevarwi vanotyisa uye vane mukurumbira mavara avo vakazvipira ivo kunorwa, kurwa uye kuuraya shato, uye ivo vakasiya nyaya dzinobata kune ramangwana. Tiudze, iwe wakave wakafuridzirwa nechero chidimbu? Ndiani waunofarira? Ngatizivei mumhinduro!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kunyora » Mhando dzematatoo » Kufungidzira Tattoos » Viking maTatoo: magamba ekukurudzirwa na
Zelda maTatoo, akawanda mikana senge rupees muhuswa
Jesu Kristu maTatoo, zviwane zvakadzama